Hovelomina indray ny takelaby famantarana ny lalana Mahatma Ghandi eny Mahamasina, sy ny lalana Indira Ghandi eny Tsaralalàna. Nisongadina izany tamin’ny fihaonan’ny tompon’andraikitry ny tanànan’Antananarivo sy ny masoivoho vaovaon’i Inde monina sy miasa eto Madagasikara, i Abbay Kumar, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely.
Hovelomina, toy izany, koa ireo mari-pamantarana amin’ny arabe na « marquage au sol » amin’ireo lalana roa ireo. Tafiditra amin’ny fahatsiarovana ny faha-150 taona nahaterahan’i Mahatma Ghandi izao hetsika izao.
Hotokanana tsy ho ela ireo lalana ireo. Voaresaka koa nandritra ny fihaonana teo amin’ny roa tonta ny hanaovana tanàna mpirahavavy an’Antananarivo amin’ny tanàna iray any Inde.
Tamin’ity herinandro ity, nitarika atrikasa niaraka tamin’ny mpandray anjara 24 avy amin’ny firenena 14 manerana an’i Afrika ny ekipan’ny Peace Corps sy ny mpanolotsaina momba ny sakafo ara-pahasalamana avy amin’ny USAID. Tamin’izany no nianarany ny fomba tsara indrindra hanampiana ny reny sy ny zaza hitondra fanovana mahomby eo amin’ny fahasalamany sy ny sakafo hohaniny. Hoentin’izy ireo mody any an-tanindrazany izany fahalalana izany ary hampianariny olona maro. Fomba fanehoana fihetsika ara-pahasalamana izany.